Poppler rakanakira rairo yekushandisa turu yePDF | Linux Vakapindwa muropa
Poppler ine raibhurari yekupa PDF uye maturusi raira yekuraira qayo anoshandiswa kubata mafaera ePDF. Izvi zvinobatsira pakupa mashandiro ekupa iyo PDF kunge raibhurari yakagovaniswa.
poppler raibhurari yakavhurwa sosi, iyo inoshandiswa kuona zvinyorwa zvePDF. Ichi chinoshandiswa chinochengetwa ne freedesktop.org.
poppler Iyo yakavakirwa paXpdf uye yakagadzirwa nekuda kwezvikonzero zviviri zvikuru.
Gonesa zvakare nyore kushandisa kweinopa injini izvi zvinobvumidza basa rakadzokororwa kudzikiswa, uye rinopfuura zvinangwa zveXpdf uye rinobatanidza zvakanyanya uye rinoshandisa mashandiro anopihwa nehurongwa hwekushandisa nepo xpdf iri yega-ine.
poppler Iyo inoshandiswa nemapurogiramu mazhinji akagadzirirwa kuona nekugadzirisa mafaira ePDF. kusanganisira KPDF uye sampuli uye inogona kutoshandiswa seXpdf backend.
Chinangwa cheiyo xpdf forogo kugona kupa mashandiro ekupa iyo PDF seyakagovaniswa sosi. Zvakare Raibhurari, kuisa pakati kugadzirisa kwekuchengetedza.
Iwo maficha anosanganisira iyo xpdf kodhi base, uye pese panowanikwa chinetso chekuchengetedza, ese maapplication ekutsinhana zvigamba uye nekudaro kuburitswa kutsva kunomuka.
Nekudaro, zvese zvinogoverwa zvinofanirwa kurongedza uye kuburitsa vhezheni nyowani yeaya xpdf-based vanoona. Nezve izvi pane yakawanda yekuedza yakadzokororwa nemamiriro azvino.
1 Maitiro ekuisa Poppler pane akasiyana Linux kugoverwa?
1.1 Isa Poppler pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa.
1.2 Isa Poppler pane Arch Linux uye zvigadzirwa
1.3 Isa Poppler pane RHEL, CentOS, Fedora, uye zvigadzirwa
1.4 Isa Poppler mune yakavhurikaSUSE
1.5 / Unganyora sei Poppler kubva kune kodhi kodhi?
Maitiro ekuisa Poppler pane akasiyana Linux kugoverwa?
Kuti uise ino shandiswa kwazvo pane yako system, unofanirwa kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi zvinoenderana nekuparadzirwa kweLinux kwauri kushandisa.
Poppler chishandiso chinowanikwa mukati mezvakachengetwa zveanenge ese maLinux kugoverwa saka kuiswa kwayo kuri nyore.
Isa Poppler pane Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa.
Kuti uise chinhu ichi, Tinofanira kuvhura terminal neCtrl + Alt + T uye mairi tichaita unotevera kuraira:
Ongorora: iyi nzira yekumisikidza inoshandawo kumaARM masystem (Raspberry Pi).
Isa Poppler pane Arch Linux uye zvigadzirwa
Kana iwe uri mushandisi weArch Linux kana chero sisitimu iyo inotorwa kubva pairi seManjaro, Antergos nevamwe. Tinogona kuwana chinhu ichi kubva kumahofisi epamutemo ingovhura terminal mune system uye mhando:
Ongorora: uyu wekuisa rairo unoshandawo kune KaOS.
Isa Poppler pane RHEL, CentOS, Fedora, uye zvigadzirwa
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veaya maLinux distros kana chero sisitimu inotorwa kubva kune imwe yeiyi, nzira yekuisa ichi chinoshandiswa pane yavo system inotevera.
Ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye voita unotevera kuraira mairi:
Isa Poppler mune yakavhurikaSUSE
Kune avo vane openSUSE yakaiswa pamakomputa avo, vanogona kuwana chishandiso ichi nerubatsiro rweYaST, kubva kune yakavhurikaSUSE software webhusaiti neiyo-bhatani yekumisikidza nzira kana kubva kumagumo unogona kuiisa nemirairo inotevera:
/ Unganyora sei Poppler kubva kune kodhi kodhi?
Chekupedzisira, kune zvekugovera zvisina Poppler mukati mezvinochengeterwa, vanogona kuumbiridza chishandiso ichi kubva kune yayo kodhi kodhi.
Kune izvi isu tinofanirwa kuve nerutsigiro rweGit muchirongwa.
Tichavhura terminal uye tichaenda kunotora kodhi kodhi nemirairo inotevera:
Iye zvino tave kuzopinda iyo poppler dhairekita kuti titange nekuumbwa kwaro rekodhi kodhi.
Waita izvi ikozvino tichaenda kuendesa iyo yekuunganidza mirairo mune iyo terminal iri mukati mepopler folda:
Zvino semudzi isu tinoita:
Uye vakagadzirira nayo, ivo vanenge vatove neichi chinoshandiswa chakaiswa pamakomputa avo kuti vakwanise kuishandisa.
Kuti udzidze zvimwe zvishoma nezvekushandisa kwechinhu ichi chaunogona kushanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Poppler rakanakira rairo yekushandisa turu yePDF
Diego chertoff akadaro
Mhoroi, ini ndinoona kuti raibhurari yePoppler yatove yakaiswa pane yangu Linux Mint, asi ini handina zano rekuishandisa. Unogona here kupa muenzaniso? Ndatenda
Pindura Diego Chertoff